COMPUTER တွင် USB အသုံးပြုခွင့် ပိတ်နည်း | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
ဧရာနောက်လူငယ်လေးများဘလော့ကို လာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊
ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကိုလာလည်တဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ /.. "(ဒီ Blog လေးကို ကျွန်တော့၏ မှတ်စုစာမျက်နှာ တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်ပြီး မျှဝေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ )" ::.ဘလော့လေးမှာပါဝင်ကူညီရေးသားလိုသူများအားလုံးကိုလဲ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
COMPUTER တွင် USB အသုံးပြုခွင့် ပိတ်နည်း
(၁) RUN >>> REGEDIT ကိုခေါ်ပါ။
(၂) HKEY_LOCAL_MACHINE >>> SYSTEM >>>
CURRENT CONTROL SET>>>CONTROL
(၃) RIGHT CLICK >>> NEW >>> KEY ပြုလုပ်ပါ။
(၄) KEY NAME ကို StorageDevicePolicies ဟုပေးပါ။
(၅) USB အသုံးပြုခွင့်ပိတ်လိုလျှင် KEY VALUE ကို 1 ဟုရိုက်ပါ။
အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုလျှင်0ဟုရိုက်ပါ။
သင့် IP Address ကြည့်ရန်
Betsson casino report
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်ဆိုဒ်များလေ့လာရန်မြန်မာမြန်မာသတင်းမြန်မာဂျီနီဗာအမြင်သစ်Planet Myanmarရန်ကုန်စီးတီးရန်ကုန်ဂလိုဘယ်Forverspace MRTV-3
တင်ထားသမျှ Post အားလုံး
KENBO-E71 FRP Lock ကို Without Tools ဖြင့်ကျော်နည်း
Post မရေးဖြစ်တာလဲကြာဘီ KENBO-E71 ကို Without Tool နဲ့ FRP Lock ကျော်တဲ့နည်းလမ်းလေးပါ သိတဲ့အတိုင်းပါဘဲ ကျနော်ကတော့ Tools User သမားတွေဆိုတော့...
Huawei S8600 Firmware
﻿ ﻿﻿﻿ Huawei S8600 firmware လေးပါ လိုအပ်နေတဲ့သူတွေ အလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်ရန် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊ ဒီနေရာလေးမှာဒေါင်းပါ ﻿
English - myanmar - English Dictionary (wxPyDict) လေးပါ
english - myanmar , myanmar-english dictionary ပါ . နှစ်မျိုးစလုံးသုံးလို့ရပါတယ် . ctrl + shif နှိပ်ပြီးတော့ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ် . ...
IPhone 5s Power button မသုံးဘဲ Power Off နည်း
ဒီ Video လေးကတော့ Iphone 5s တွေမှာ တခါတရံ Touch က အလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ Power Off Slide ဆွဲလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်မှာပါ....။ ...
ဖုန်းတွေမှာPattern Lock မေ့သွားရင် ပြန်ဖြည်နည်း
ဒီအကြောင်းလေးကတော့ သိတဲ့သူတွေလဲများပါတယ် မသိသေးတဲ့သူတွေလဲ ရှိတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ..အသိပြီးသားသူတွေအတွက်တော့ အဖိုးမတန်ပေမဲ့ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ေ...
ကိုယ်ပိုင်ဘလော့တစ်ခုကိုအခုမှစပြီး ပြုလုပ်ချင်သူတွေအတွက် ကိုညီလင်းဆက် နဲ့ Saturngord တို့ေ၇းသားတဲ့&nbsp; HOW TO MAKE MYANMAR BLOG န...
Window7ဆိုင်ရာနည်းပညာစုစည်းမှု
Windows7မှာ Appearence Fonts ဘယ်လိုချိန်းကြမလဲ Windows7မှာ Appearence Fonts ကို zawgyi အဖြစ် change ဖို့ နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။...
Mouse Cursor နောက်ကနေစာသားလေးလိုက်နေတာလေးထည့်ထားချင်ရင်
blog မိတ်ဆွေညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ blog နည်းပညာတွေမရေးဖြင့်တာကြာပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီနေ့ တော့အချိန်ရတာနဲ့blogger ...
ကျွန်တော်တို့ Pakokku မှာဆိုရင်ပေါ့
ကျွန်တော့်ဘလော့လေးကိုလာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ၊ ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနှင့်တော်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူး လို့ထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်ပါတယ်။ အားလုံးရဲ့ဝေဖန်မှုအောက်မှာဘဲ ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ.....
Apk Wallpaper (2)
Blog Templates (3)
Blog နည်းပညာ (6)
CDMA Internet Setting (1)
Deep Freeze Password Remover (1)
Facebook နည်းပညာ (12)
Flag Animation (1)
Gtalk & Gmail နည်းပညာ (7)
HTML Code များ (1)
html ကာလာကုတ် (1)
Online Photoshop (3)
PageMaker အကြောင်း (1)
Password Checking (1)
Phone Apk (4)
Phone Driver (1)
Photoshop Shortcut Keys (1)
Send big file (2)
SKYNET Apk File (1)
Viber Apk (1)
Window7တင်နည်း (2)
Window7နည်းပညာ (1)
window7 password cleaner (1)
20.7.2013 တွင် စတင်တည်ထောင်ထားပါသည်။